Mgbachi Twitter: Nnukwu Mmetọ nke Isi Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Nigeria
Mgbachi Twitter: Nnukwu Mmegbu nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Nigeria
Ebe E Si Nweta: Punchng
Gọọmentị Federal nke Nigeria kwupụtara nkwusioru nke ọrụ Twitter, na enwere ike iji ngwa a dịka ikpo okwu maka mmemme nwere ike imebi ịdị adị nke ụlọ ọrụ Nigeria.
Ọtụtụ ndị Naijiria gụrụ ọkwa nke mmechi Twitter dị ka ngosipụta nke mkpa ikpo okwu na nyiwe dijitalụ ndị ọzọ (soshal midia) na ndị Naịjirịa na ịnweta ozi na ịgbasa otu.
Ntụziaka sitere n'aka gọọmentị Naịjirịa bụ isi ya, mmetọ nke ikike ndị Naijiria ọ bụghị naanị maka nnwere onwe ikwu uche, mana ọtụtụ ikike ndị ọzọ ekwenyesiri ike na Iwu Naịjirịa 1999 (dịka emezigharịrị ya), Akwụkwọ Iwu Africa Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Ndị Mmadụ na Ọgbụgba ndụ ụwa gbasara ikike obodo na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Nkwụsịtụ a, nke bụ mmeghachi omume nke gọọmentị Naịjirịa na mmanye nke ụlọ ọrụ nke iwu ya, bụ iji kpuchido gọọmentị maka nkatọ, ọkachasị ndị ntorobịa Naịjirịa karịrị 70% nke ndị bi na mba ahụ.
Okwesiri iburu n'uche na a kpochapuwo ndi isi ochichi nke Nigeria site n’uzo obula nke ndi mmadu. O nwere ike ịbụ naanị ya bụ onye isi ala kemgbe mba ahụ laghachiri na ọchịchị onye kwuo uche ya na 1999 onye na-anaghị enye ajụjụ ọnụ ma ọ bụ na-akparịta ụka na mgbasa ozi.
Ebumnuche a bụ iji mee ka ndị obodo Naijiria ghara ịkọwa ya ndị na-aga n'ihu na ntanetị mgbasa ozi iji kesaa echiche ha banyere omume na atumatu nke gọọmentị.
O doro anya na ịkwụsị Twitter bụ iwu na-akwadoghị na atumatu iwu na-akwadoghị dịka nke a anaghị anakwere!
Mkpebi 2016 Mba Ndị Dị n'Otu kwadoro na ikike ụmụ amaala na-anọghị n'ịntanetị ga-etinye na ịntanetị. N’atughi anya, Naijiria na ndi ozo jikotara mkpebi a.
Anyị na-arịọ ndị ọchịchị Naijiria ka ha kwanyere na ịmanye ikike dịịrị ụmụ amaala dịka iwu ala Naịjirịa na nkwekọrịta mba ndị ruuru mmadụ na Naịjirịa so
Anyị ga-akpọtụrụ Ministry of Information iji nweta nkọwa zuru oke banyere ọkwa a, yana usoro iwu nke na-akwado nkwupụta enweghị ụdị ọchịchị.
Anyị na-adụ ndị ọrụ niile nke twitter na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ dị na Nigeria aka ka ha budata netwọk nzuzo nke onwe (VPNs) iji mee ka ha nwee ike ịga n'ihu na-eji nyiwe ahụ maka nhụjuanya akụ na ụba ha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebe anyị niile na-alaghachi na iwu a nke ndị Naijiria. ọchịchị.
Nke a bụ a eduzi na otu esi esi di na ntaneti na nsogbu nke netwọkụ ma budata ya Ayeta ngwa oru, nke a haziri n’atụmanya nke ụdị ọchịchị aka ike dị otú ahụ.